अहिलेको व्यवस्थामा जनता सर्वोपरी छैनन् !
अरुणदेव जोशी शनिबार, असोज ३, २०७७
बल्ल बल्ल सांसद भए बामदेव गौतम ।
प्रतिनिधि सभाको चुनावका बर्दियाबाट हारेको बामदेव गौतम तत्कालिन एमाले–माओवादी गठबन्धनका एउटा मात्र यस्ता ठूला नेता थिए जसको हार अनपेक्षित थियो । हुन त गठबन्धका ठूला नेता भनिएकामध्ये नाराणकाजी श्रेष्ठ पनि गोरखामा पराजित भएका थिए । तर नाराणकाजीको पराजय भने अनपेक्षित थिएन । बरु उनको जित अनपेक्षित हुनसक्थ्यो ।
किनकी उनी पूर्वप्रधानमन्त्री र उनकै पार्टीका पूर्व शीर्ष नेता अनि पछिल्लो चुनावमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भएका मध्येका एक नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसित चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । भट्टराईको पार्टीलाई सानो पार्टी भन्ने बाहेक उनीसँग भट्टाराईलाई हराउन बलियो तर्क थिएन । अनि श्रेष्ठकै जिद्दीका कारण सम्भावित नेकपामा आइसकेका भट्राई बाहिरिएका थिए ।
नारायणकाजीलाई त आफू हार्न सकिन्छ भन्नेमा कुनै दुविधा थिएन । बरु जिति पो हालिन्छ कि भन्ने आशा भने थियो । पछिल्लो चुनावमा मकवानपुरबाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनी गोरखा पुगेका थिए । उनको उम्मेदवारीलाई बाबुरामसँग निउ खोजेको जस्तो गरी पनि हेरिएकै थियो ।
जब बामदेव अर्को कित्तामा देखिन्छन् पार्टीभित्र आफ्नो पकड अप्ठेरोमा देखिन्छ । बामदेवालाई उनले फेरि एउटा लड्डु देखाइहाले ।
तर बामदेव गौतमले आफू हारिएला भन्ने चिताएका पनि थिएनन् । बरु उनी चुनाव जितेर प्रधानमन्त्रीको दावेदार बन्ने सोचमा भएको प्रष्ट बुझिन्थ्यो । चुनावको बेला आपूmलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर उनले स्वयं घोषणा नगरे पनि बर्दियाका उनका चुनाव प्रचारकहरुले उनलाई प्रधानमन्त्रीकै रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनी आपैmले पनि बेला बेलामा अब पालो आप्mनै भएको बताउने गरेका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका सञ्जय गौतम अपेक्षित रुपमा बामदेव गौतमसामु त्यति बलिया उम्मेदवार जस्तो देखिएका थिएनन् । तर सञ्जयले बामदेवलाई हराइदिए । केही समय पत्याउन गाह्रो भयो गौतमलाई । सत्तारुढ दलका उम्मेदवार उनी स्वयं आपूm थिए । तर पनि सञ्जय गौतमले धाँधली गराएको आरोप समेत लाग्यो ।
फेरी आफू पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी भएकोले केपी ओलीले घात गरेर हराए भनेर उनी स्वयंले कतिपय सन्दर्भमा भन्दै हिँडे । आपूmलाई कहिले प्यूठान त कहिले बर्दियाको उम्मेदवार भन्ने गरेका बामदेवलाई बर्दियाको जनताले आफ्नो मानेन, सञ्जय गौतमलाई जिताए । शीर्ष नेताहरुमध्ये आफू पराजित भएपछि गौतमले त्यसलाई सहज रुपमा पचाएनन् ।
संसद र सत्तामा जान गौतमले निरन्तर प्रयास गरिरहे । पार्टी भित्रका विभिन्न कित्तामध्ये जसले उनलाई सांसद बनाउँछु भन्छ उनी उसैको कित्तामा देखिए । पार्टी समिकरणमा पेण्डुलमजस्ता देखिए बामदेव गौतम । उनी जुन गुटमा हुन्थे त्यसै गुटको पल्ला भारी हुने स्थिति बन्यो र केपी ओलीले उनलाई प्रशस्त प्रयोग गरे । जब बामदेव अर्को कित्तामा देखिन्छन् पार्टीभित्र आफ्नो पकड अप्ठेरोमा देखिन्छ । बामदेवालाई उनले फेरि एउटा लड्डु देखाइहाले ।
सबैभन्दा पहिले डोल्पाका सांसद दानबहदुर बुढा बामदेवलाई पुनः सांसद बनाउन सिट छोड्न तयार छन्, बामदेव डोल्पाबाट चुनाव लड्दैछन् भन्ने समाचार आए । त्यो समाचारको बुढाले नै खण्डन गरे । केपी ओलीको इशारामा नै बुढा तयार नभएको आरोप लाग्यो । जब कि भनिन्छ, पार्टीभित्र कुनै सिट खाली गराएर उनलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव ओलीले नै राखेका थिए ।
बामदेवले ‘केही नपाए त्यही सही’ भने जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि आँखा लगाएरै छाडे ।
त्यसपछि प्रचण्डको नजिक भएका बामदेवलाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट सांसद बनाउने प्रस्ताव भयो । प्रचण्डकै पहलमा उनकै निवासमा क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरले बामदेवका लागि सिट छोड्न तयार भएको सहमति गरे र उनले पार्टीमा राजिनामा पनि बुझाए । तर फेरि बामदेवलाई सांसद बनाउने बाटोमा केपी ओली नै अवरोध भएको आरोप लाग्यो । चर्को जनविरोध पनि बामदेवले झेल्न सकेनन् र आफू सांसद बन्न नचाएको बताउन बाध्य भए ।
तेस्रो पटक उनले नेता रविन्द्र अधिकारीको देहावसानपछि भएको उपनिर्वाचनमा पोखराबाट प्रत्यासी हुन प्रयास पनि गरेका थिए । त्यसबेला पनि पोखराबाट प्रत्यासी हुन सुझाव दिने केपी ओली नै भएको पार्टीका भित्रियाहरु बताउँछन् । केपीले स्थानीय दवावका कारण बामदेवलाई उम्मेदवार बनाउन सकिँदैन भनेर नबनाउनकै लागि प्रस्ताव गरेका हुन् भन्ने पनि छन् । बामदेवको त्यो प्रयास पनि असफल भयो ।
प्रतिनिधि सभामा जाने सारा प्रयास असफल भएपछि उनले राष्ट्रिय सभामा जाने बाटो खोजे । हद त तब भयो, जब उनले संविधानको व्यवस्थालाई नै लत्याउँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनु पर्छ भनेर संविधान संशोधन नै गर्न दवाव दिए र अध्यादेशमार्फत् संविधान संशोधनको तयारी पनि भयो । उनको त्यही प्रधानमन्त्री जसरी पनि बन्ने चाहनाका कारण पहिलो लटमा नारायणकाजीहरु राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्दा उनी बनाइएनन् ।
तर उनी अडानमा बसिरहन पनि सकेनन् । उनले प्रधानमन्त्री हुन नपाए राष्ट्रिय सभामा जान्न भनेपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद पद गुमाइसकेको युवराज खतिवडालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाए, फेरि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नेगरी । तर बामदेवले ‘केही नपाए त्यही सही’ भने जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि आँखा लगाएरै छाडे ।
बामदेव सांसद त भइसकेका छन् तर मन्त्री होलान् त ? भन्न सकिन्न, बनिहाले पनि रहिनरहन सक्छन् ।
अन्ततः राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर बामदेव सांसद भए । त्यो पनि जति सहज हुनु पर्ने हो त्यति सहज भएन, तर भइछाडे । अब उनको अडान छ, मन्त्री बन्ने, एकपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उनलाई उपप्रधानमन्त्री नै चाहियो, त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित । उनले खुलेरै भनिसकेका छन् ।
तर संविधानको व्यवस्थाको बाधा कसरी फुकाउने त्यो अहिले चुनौती छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभामा हारेका व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने उल्लेख छ । कुनै व्यक्ति सांसद नभएपनि ६ महिना मन्त्री बन्न सक्छन् तर कायम रहन उसले ६ महिनाभित्र सांसद बनेकै हुनुपर्छ ।
बामदेव सांसद त भइसकेका छन् तर मन्त्री होलान् त ? भन्न सकिन्न, बनिहाले पनि रहिनरहन सक्छन् । अदालतले उनको नियुक्त बदर गर्न सक्छ । किनकी उनी प्रतिनिधि सभा हारेका व्यक्ति हुन् । हुन सक्छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अलग विषय हुन् प्रतिनिधि सभामा हारे पनि उनी राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन्, त्यसैले मन्त्री हुन सक्छन् भनिएला ।
तर केपी ओलीलाई पनि उनलाई मन्त्री बनाउने चाहना छ भनेर कल्पना गर्ने ठाउँ छैन । उनी मन्त्री बन्दा अर्का दावेदार नारायणकाजी पनि अघि आउने छन् अनि उनी पनि उपप्रधानमन्त्री नै हुनुपर्यो । त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालय नै चाहिने होला ।
यो सबै भइरहेकै छ तर यी सब हुँदा लोकतन्त्र चाहिँ हारिरहेको छ । संविधानलाई समेत लत्याएर जनताले अस्वीकार गरेका मानिस अनेक बाटोबाट जनप्रतिनिधि बन्छन् भने यो व्यवस्था जनता सर्वेपरि भएको व्यवस्था कसरी हुन सक्छ ? यो जनताको मजाकको व्यवस्था बनेको छ ।
पक्का पनि अहिलेको व्यवस्थामा जनता सर्वोपरी छैनन् । नेता नै सर्वोपरी छन् । नेताले जे चाहन्छ त्यो हुन्छ, जनताले चाहेको होइन । जनता भोकै भात खान टुँडिखेलमा लाइन लाग्न पुग्छन् । त्यो पनि सरकारले ख्वाएको भात होइन कुनै मनकारीले खुवाएको । विश्व महामारीले आक्रान्त भएको बेला निरिह भएर सत्तारुढ पार्टीको नौटंकी हेर्न जनता बाध्य हुन्छन् ।
के कारण, के का लागि भन्ने केही भेउ नै नपाई नेपाली जनता कहिले घरभित्र र कहिले घरबाहिर बस्न बाध्य हुन्छन् । यदी लोकतन्त्र यही हो भने, कसरी भन्ने लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुन्छ ?
स्ट्रेट ड्राइभका यसअघिका लेखहरु पनि पढ्नुहोस्
सुशान्त, कंगना, अर्नव, मोदी, भारत र नेपाली परिवेश
किन चाहियो कुलमानै, काम भए भएन ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ३, २०७७ ०२:२३
बुधबार, पुस २९, २०७७ १८:०८ ‘डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाटै पैसा चोरेका छन्, छानवीन होस्’
सोमबार, पुस २७, २०७७ १५:१८ राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अख्तियार प्रमुखको ‘सेटिङ’मा नोट चोरीको फाइल गायब
शुक्रबार, पुस २४, २०७७ ०१:०१ एकपछि अर्को विवादमा एनआरएनए युके अध्यक्ष गुरुङ, आर्थिक घोटालाका ‘साझेदार’ पूर्वअध्यक्ष घले
बुधबार, पुस २२, २०७७ १६:५० एकतन्त्रीय नेतृत्व र स्वार्थ समूहका कारण अवसान उन्मुख गैरआवासीय नेपाली संघ!
सोमबार, पुस २०, २०७७ १७:२५ वीरगञ्ज टर्मिनल बसपार्क: नियमित सञ्चालनमा ‘दलाल’को तगारो, रमिते बनेका छन् सुरक्षा निकाय
शनिबार, पुस ४, २०७७ १२:५१ ओलीको अध्यादेश: नैतिक संकटमा परेर सत्ता जोगाउन संविधानलाई सिकार गर्नु देशद्रोह समतुल्य
प्रदेश १ काे प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिने विषयले कांग्रेसमा भाडभैलो, देउवा र पौडेलबीच आरोप प्रत्यारोप
बारामा खाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई कारवाही
नेपालले दशरथ रंगशालामा दर्शकमाझ विश्वकप छनोटका खेल खेल्ने
यी हुन् फुटबल इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ह्याट्रिक प्रहार गर्ने खेलाडी
बार्सिलोना भर्सेस रियल सोसिडाड : सिजनकै उत्कृष्ट खेल, नाटकीय जीत निकाल्दै बार्सिलोना फाइनलमा
युभेन्टस् भर्सेस् इन्टर मिलान : १ गोल २ कीर्तिमानको संघारमा क्रिस्टियानाे रोनाल्डो
मेसीले के गरे म बुझ्छु, लगातार फल गरेपछि उनको प्रतिक्रिया सामान्य हो : प्रशिक्षक कोएम्यान
ट्रक र बस एक आपसमा ठोक्किँदा एकको मृत्यु, दुई घाइते
चालु आर्थिक वर्षमा ६९ पूर्वाधार सम्पन्न
कञ्चनपुरमा घाँस काट्न गएकी महिला बेपत्ता